Vaovao - Fahasamihafana eo amin'ny filtration sy ny sivana lalina
Fahasamihafana eo amin'ny filtration ambonin'ny sy ny filtration lalina
Ny fitaovana lamba dia ampiasaina amin'ny filtration ambonin'ny tany ary ny fitaovana tsapa dia ampiasaina amin'ny filtration lalina. Ireto misy ny maha samy hafa azy:
1. Ny fitaovana lamba (monofilament nylon, monofilament vy) dia manaparitaka mivantana ireo loto ao anaty filtration eo ambonin'ilay fitaovana. Ny tombony dia azo diovina matetika ny firafitry ny monofilament ary ambany ny vidin'ny fanjifana; Fa ny fatiantoka dia ny maody filtration ambonimbony, izay mora miteraka ny fanakanana ny harona sivana. Ity karazana vokatra ity dia mety indrindra amin'ny fotoana fanasiana marokoroko ary tsy dia mazava loatra, ary ny mari-pahaizana sivana dia 25-1200 μ m。
2. Fitaovana nahatsapa (lamba fanjaitra tototry ny fanjaitra, vahaolana notapatapahina lamba tsy tenona) dia fitaovan'ny sivana telo-mirefy mahazatra, izay miavaka amin'ny firafitry ny fibre malalaka sy ny porosity avo, izay mampitombo ny fahafahan'ny loto. Ity karazan-kazo fibre ity dia an'ny maody fanelingelenana mitambatra, izany hoe ireo sombin-javatra maloto kokoa dia voahitsakitsaka ambonin'ny velaran'ny fibre, raha ny potipotika tsara kosa dia voafandrika ao anatin'ny sosona lalina amin'ny sivana, noho izany ny filtration dia manana filtration avo kokoa fahombiazana, Ho fanampin'izany, ny hafanan'ny hafanana avo lenta, izany hoe ny fampiharana ny teknolojia fanodinana eo noho eo, dia afaka misoroka tsara ny fibres tsy ho very noho ny fiatraikany haingam-pandeha avo lenta mandritra ny sivana; Ny fitaovana tsapa dia azo alefa ary ny fahamarinan'ny filtration dia 1-200 μ m。
Ny toetra lehibe ananan'ny fahatsapana sivana dia ireto manaraka ireto:
Polyester - ny fibre sivana mahazatra indrindra, fanoherana simika tsara, hafanana miasa latsaky ny 170-190 ℃
Polypropylene dia ampiasaina amin'ny sivana ranoka amin'ny indostrian'ny simika. Manana fanoherana asidra sy alkaly tena tsara izy io. Ny mari-pana miasa dia latsaky ny 100-110 ℃
Volon'ondry - fiasa tsara manohitra ny solventy, saingy tsy mety amin'ny asidra manohitra ny alikaola
Nilong dia manana fanoherana simika tsara (afa-tsy ny fanoherana asidra), ary ny maripana miasa dia latsaky ny 170-190 ℃
Ny fluoride dia manana fiasa tsara indrindra amin'ny fanoherana ny mari-pana sy ny fanoherana simika, ary ny maripana miasa dia latsaky ny 250-270 ℃
Fampitahana ny tombony sy ny fatiantoka eo amin'ny akora fanasiana ambony sy ny fitaovana sivana lalina
Misy karazany maro ny fitaovana sivana ho an'ny sivana. Toy ny tenona tariby harato, taratasy sivana, ravina metaly, singa sivana sinter ary tsapa, sns., Na izany aza, araka ny fomba fanivanana azy, dia azo zaraina amin'ny karazany roa izy io, dia ny karazana et ny karazana halaliny.
1. Fitaovana sivana ambony
Ny akora fanasiana karazana ambonimbony dia antsoina koa hoe fitaovana fanivanana tanteraka. Ny velarany dia manana géometrika, micropores na fantsona mitovy. Ampiasaina hisamborana ny loto ao anaty menaka manakana. Ny sivana dia matetika sivana tsotra na twill vita amin'ny tariby vy, fibre lamba na fitaovana hafa. Ny fitsipiky ny sivana dia mitovy amin'ny fampiasana ny efijery marina. Ny fahamarinan'ny sivana dia miankina amin'ny refy geometrika an'ny micropores sy ny fantsona.
Ny tombony amin'ny akora fanivanana karazana ety an-tany: fanehoana marina ny marim-pototra, fampiharana marobe. Mora ny manadio, azo ampiasaina indray, fiainana maharitra.
Ny fatiantoka ny fitaovana sivana karazana eto an-tany dia ireto manaraka ireto: loto kely; Noho ny fetran'ny teknolojia famokarana, ny fametrahana mazava dia latsaky ny 10um
2. Fitaovana sivana lalina
Ny fitaovana sivana karazana halalina dia antsoina koa hoe fitaovana fanivanana karazana na fitaovana fanivanana karazana anatiny. Ny fitaovana sivana dia misy hateviny, izay azo takarina ho toy ny superposition maro karazana sivana ambonin`ny. Ny fantsona anatiny dia tsy misy habeny tsy fahita momba ny hantsana lalina. Rehefa mandalo ny sivana ilay menaka dia tratra na voadona amin'ny fotony samihafa amin'ny fantsom-panafody ny loto ao anaty menaka. Mba hitana ny anjara toeran'ny filtration. Ny taratasy sivana dia fitaovana sivana mahazatra mahazatra ampiasaina amin'ny rafitra hydraulic. Amin'ny ankapobeny dia eo anelanelan'ny 3 sy 20 ny marina.
Ny tombony azo avy amin'ny fitaovana fanivanana karazana lalina: loto be dia be, androm-piainana lava, afaka manala ireo sombin-javatra marobe kokoa noho ny marin-tariby sy ny sorisory, ny sivana avo lenta.
Ny fatiantoka ny fitaovana fanivanana karazana lalina: tsy misy habe mitovy amin'ny elanelam-bokatra sivana. Ny haben'ny sombintsombin'ny fahalotoana dia tsy azo fehezina marina; Saika tsy azo atao ny manadio. Ny ankamaroan'izy ireo dia fanary. Be ny fanjifàna.